XOG: Cumar C/rashiid & C.C.Shakuur oo Hormuud ka ah Qorshe Imaaraadka qal qal ku galinayo Villa Somalia… | Allbanaadir News	XOG: Cumar C/rashiid & C.C.Shakuur oo Hormuud ka ah Qorshe Imaaraadka qal qal ku galinayo Villa Somalia…
XOG: Cumar C/rashiid & C.C.Shakuur oo Hormuud ka ah Qorshe Imaaraadka qal qal ku galinayo Villa Somalia…
Warar aan heleyno ayaa sheegaya in Dowladda isku taga Imaaraadka Carabta siyaasiyiin iyo Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ay ku qal qaalineyso sidii ay abuuri lahaayeen falqalatooyinka ka dhan ah Dowladda uu hogaamiyo Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Dhaqaalo fara badan ayay Imaaraadka Carabta u diyaarisay iney ku maalgeliso siyaasiyiinta iyo Xildhibaanada ay ka damacsan tahay iney fuliyaan qorshaha qarsoon ee ay ka damacsan yihiin Soomaaliya.
Qorshahan oo aan ahayn mid Ugub ayaa Imaaraadka Carabta waxaa ka gacansiinaya qaar ka mid ah Maamul Gobolleedyada oo diidan in Xiriirka Dowladda Soomaaliya ay la yeelaneyso Qadar,xiriirka dibloomasiyadna loogu jarayo Imaaraadka Carabta.
Senator Cumar C/rashiid Cali Sharmarke,oo Wakiil Imaaraadka uga ah Soomaaliya ayaa gacanta loo geliyay hanaanka cusub ee la doonayo in loo maro majaxaabinta maamulka Villa Soomaaliya Cadaadis xooggan hadda kala kulmaya Imaaraadka Carabta oo sii xumaanaya xiriirka u dhaxeeya.
Madaxda Maamul Gobolleedyada dalka ayaa ugu baaqay Dowladda Soomaaliya iney wanaajiso Xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeyo Imaaraadka Carabta,kaasi oo maalinba maalinta ka danbeysa sii xumaanaya.
Dowladda Qadar oo xiriir aan wanaagsan kala dhaxeeyo Dowladaha kale ee Khaliijka ayaa hadda wado Tallaabooyin wax ku ool oo ay ku caawineysa Soomaaliya si looga maarmo taageeradii Imaaraadka Carabta.